Hamrohealth, Author at hamrohealth - Page5of 6
अब सवारी चालकहरुलाइ मापसे जस्तै लापसे सेवन पनि चेकजाँच हुने।
३१ वैशाख, जनकपुरधाम । मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी चलाउनेहरुलाई कारबाही गर्न थालिएको अभियान ‘हिट’ भयो । प्रहरीले पनि सयौंलाई कारबाही गर्‍यो, मापसे गरेर सवारी चलाउने पनि सचेत भए ।
अब प्रहरीले मापसे जस्तै अर्को अभियान सुरु गरेको छ, लापसे । अर्थात् लागुपदार्थ सेवन जाँच ।
प्रदेश २ प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन (मापसे) का साथै लागुपदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाए नचलाएको जाँच गर्न थालेको हो ।
मादक पदार्थसँगै लागुऔषध प्रयोग गरेर पनि सवारी चलाउने क्रम बढेपछि यो अभियान सुरु गरिएको बताउँछन् प्रदेश २ का ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एसपी योगबहादुर पाल ।
पालका अनुसार बारा र सप्तरीका केही सवारी चालकमा लागुपदार्थ प्रयोग गरे-नगरेको जाँच गरिएको छ ।
बारामा ५३ जना र सप्तरीमा १० जना सवारी चालकको पिसाब परीक्षण गरिएको छ । यस क्रममा दुई जनाले लागुऔषध गाँजा प्रयोग गरेको फेला परेको उपरीक्षक पालले बताए ।
उनीहरुलाई दिनभर नियन्त्रणमा लिई जरिवाना तिराएर आगामी दिनमा यस्तो नगर्न सचेत गराएर छाडिएको छ । उनका अनुसार लापसे जाँच अभियान केही दिनभित्रै प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ ।
यसरी गरिन्छ पिसाबको जाँच
नार्काेनन नामक संस्थाले ड्रग यूरिन टेस्ट किट प्रदेश २ प्रहरी कार्यालय बारा पथलैयालाई उपलब्ध गराएको थियो । यो किटको प्रयोग गरी लागुऔषध प्रयोग गरे-नगरेकोबारे जाँच गरिएको छ । जाँचका क्रममा सवारी चालकहरुलाई एउटा सानो डिब्बा दिँदै त्यसमा पिसाब भरेर ल्याउन भनिन्छ ।
ल्याइएको पिसाब किटमा राखेपछि लागुऔषध प्रयोग गरे-नगरेको थाहा हुन्छ । ‘यदि कसैले लागुऔषध प्रयोग गरेको छ भने तत्कालै त्यसले देखाउँछ,’ पालले भने, ‘कुन लागुऔषधको प्रयोग गरेको हो त्यो पनि देखाउँछ किटले ।’
दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि यो अभियानको प्रारम्भ गरिएको पालले बताए । उनकाअनुसार लापसे जाँच गर्ने किट उपलब्ध गराउन माथिल्लो निकायमा आग्रह गरिएको छ र आउनासाथ आठ वटै जिल्लामा जाँच सुरु हुनेछ ।
उनका अनुसार नार्काेननले सय वटा मात्रै किट उपलब्ध गराएको छ ।यो खबर आजको अनलाइन खबर पत्रीकामा छापिएको छ।
भर्खरै जन्मेका बच्चाका आँखामा क्यान्सर।
काठमाडौं : अस्पतालमा छोरी जन्मँदा रविन श्रेष्ठ रमाए। अँध्यारोमा उनले मोबाइलबाटै छोरीको तस्बिर खिचे। छोरीलाई घरमा लगेपछि उनले भिडियो पनि बनाए। छोरी दश दिनकी हुँदा उनको आँखामा सेतो ज्योति देखियो। उनी झस्किए। यसबारे जानकारी लिन गुगल सर्च गरे। उनी तिलगंगा आँखा अस्पताल पुगे। अस्पतालका कन्सल्टेण्ट अकुलोप्लाष्टिक सर्जन डा.बेन लिम्बु समक्ष पुगे। ‘आँखाको अल्ट्रासाउण्ड र सिटीस्क्यान गरेपछि बल्ल रोग पत्ता लाग्यो’, श्रेष्ठले भने।
दुवै आँखामा क्यान्सर (रेटिनोब्लास्टोमा) भएको पुष्टिपछि छोरीको उपचारका लागि भारत गए। नसाबाट औषधि (किमोथेरापी) दिइयो। ‘उपचारपछि अहिले छोरी स्वस्थ्य छिन्। एक कक्षामा पढ्दै छिन्’, श्रेष्ठले खुसी साटे।
आशिश जोशीकी छोरी पनि आँखाको क्यान्सरविरुद्ध जुध्दैछिन्। तीन महिना हुँदा आँखा रातो भयो। पानी आइरह्यो। उनी पनि तिलगंगा आँखा अस्पताल पुगे। अकुलर अंकोलोजिस्ट एवं अकुलोप्लाष्टिक सर्जन डा. पूर्णिमा राजकर्णीकार स्थापितले रेटिनोब्लास्टोमा भएको बताइन्।
दुई वर्षकी छोरीको उपचार गराइरहेका जोशीले भने, ‘छोरीको दृष्टि क्षमता फर्कने सक्ने चिकित्सकले बताएका छन्।’
विगतमा आँखा फालेर भए पनि जीवन बचाउनुलाई ठूलो मानिन्थ्यो। अहिले आँखा बचाउन सकिने मात्र होइन दृष्टि बचाउन सकिनेसम्मको अवस्था आइसकेको चिकित्सक बताउँछन्।
बालबालिकामा हुने आँखाको क्यान्सर नै रेटिनोब्लास्टोमा भएको चिकित्सकको भनाइ छ। अकुलोप्लाष्टिक सर्जन डा.स्थापितका अनुसार, करिब १५ हजार नवजात शिशुमध्ये एक जनामा यो रोग देखा पर्न सक्छ। नेपालमा कति बालबालिका रेटिनोब्लास्टोमाबाट पीडित छन् भन्ने बारे यकिन तथ्यांक छैन। पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकालाई यो क्यान्सरले सताएको छ। तीमध्ये ९० प्रतिशत तीन वर्ष उमेर नपुग्दै देखा पर्छ। ‘उपचार नगर्दा ९९ प्रतिशतको मृत्यु हुन्छ’, डा.स्थापितले भनिन्।
आँखा रोग विशेषज्ञका अनुसार यो रोग वंशाणुगत पनि हुन सक्छ। यो क्यान्सर आँखाको भित्री भाग (रेटिना)बाट पलाउने र अन्ततः आँखाको पूर्ण भागमा फैलिएर अन्धोपन निम्त्याउन सक्छ।
कन्सल्टेन्ट अकुलोप्लाष्टिक सर्जन डा.वेन लिम्बुका अनुसार, उपचारमा सजगता नदेखाएको अवस्थामा शरीरको अन्य भागमा समेत फैलिएर ज्यान समेत जान सक्छ।
आँखाको नानीको कालो भागमा एक किसिमको अनौठो सेता ज्योति (सेतो टीका) देखिने, असामान्यरूपमा आँखा रातो हुने, आँखाको आकार ठूलो हुने, आँखाको डेढोपनाका रूपमा यो रोग देखा पर्दछ। रेटिनोब्लास्टोमा रोगबाट प्रभावित भएका बाबुआमाका सन्तानलाई रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। पाँच वर्ष मुनिका कुनै पनि बालबालिकामा यो रोग देखा पर्न सक्ने डा. लिम्बु बताउँछन्। यो रोगले बच्चाको एक वा दुवै आँखा प्रभावित पार्न सक्छ। तर धेरैजसो बालबालिकामा एउटा मात्र आँखामा असर गरेको पाइएको छ।
आँखा रोग विशेषज्ञद्वारा आँखामा पर्दाको जाँच गरी यो रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ। रेटिनोब्लास्टोमा भए अब उपचारका लागि विदेसिनु पर्दैन। दुई वर्षदेखि तिलगंगा आँखा अस्पतालमा रेटिनोब्लास्टोमाको उपचार सेवा सुरु गरिएको छ। लेजर, क्रायोथेरापी, केमोथेरापी तथा रेडियोथेरापी विधिद्वारा यसको उपचार गरिन्छ। जटिल अवस्थमा पुगेका बिरामी निको पार्न कठिन हुन्छ। यस्ता बिरामीलाई शल्यक्रियाद्वारा आँखाको डल्लो नै निकाल्नु पर्ने डा.लिम्बुको भनाइ छ।
आँखाको डल्लो निकालेपछि प्लाष्टिकको कृत्रिम आँखा राखेर आँखाको सौन्दर्य कायम गर्न सकिन्छ।
अस्पतालकी अकुलोप्लाष्टिक सर्जन डा.स्थापितका अनुसार, गत वर्ष रेटिनोब्लास्टोमा भएका ४५ जना बालबालिका उपचारका लागि आएका थिए। तीमध्ये १० जना बालबालिकाको दुवै आँखामा रेटिनोब्लास्टोमा देखिएको थियो। ‘अट्ठाइस महिनाको बच्चा लिएर रेटिनोब्लास्टोमाको उपचारको लागि आउनु भएको छ’, डा. स्थापितले भनिन्।
उपचार गराएकामध्ये अधिकांश पाँचवर्ष मुनिका छन्। सिरहा, सर्लाही, बाँके, कैलाली, सुनसरी भोजपुर, गोरखा, जनकपुर, ताप्लेजुङलगायतका जिल्लामा जन्मेका बालबालिकामा रेटिनोब्लास्टोमा देखिएको थियो।
रेटिनोब्लास्टोमा बारे धेरैलाई जानकारी नै छैन। ‘अन्धविश्वास र पैसाको जोहो गर्न नसक्दा पनि पीडितको उपचारमा पहुँच पुग्न सकेको छैन’, उनले भने।
नेपाल अकुलोप्लाष्टिक सर्जन समाजका अध्यक्ष डा.वसन्तराज शर्मा आफ्नो स्वास्थ्य बारे बालबालिकालाई केही थाहा नहुने भएकोले अभिभावकनै सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखिएको छ।
टिनोब्लास्टोमा वंशाणुगत रोग
– १५ हजार नवजात शिशुमध्ये १ जनामा देखिने
– पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सताउने
– उपचार नगर्दा ९९ प्रतिशत मृत्युको खतरा
– आँखाको नानीको कालो भागमा सेतो टीका देखिने
– यो रोगले दुवै आँखा प्रभावित पार्न सक्ने
– आँखाको पर्दा जाँच गरी रोग पत्ता लगाउन सकिने
अब आउने जेठ दोस्रो साताबाट टिचिङ अस्पतालले कलेजो प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्ने
काडमाडौं ।शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जले जेठ दोस्रो साताबाट कलेजो प्रत्यारोपण सुरु गर्ने भएको छ। काठमाडौंनिवासी एक ५० वर्षीय व्यक्तिलाई ३० वर्षीया छोरीले कलेजो दान गर्न लागेकी हुन्।
चिकित्सकको लामो परामर्शपछि बाबुछोरी कलेजो प्रत्यारोपणका लागि तयार भएका हुन् ।
अस्पतालले डा रमेशसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा यो सेवा सञ्चालन गर्न लागेको हो । प्रत्यारोपणका लागि भारतको अपोलो अस्पतालको विशेषज्ञ टोली पनि आउनेछ। यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
बढ्ने भयो कर्मचारीको तलब २५% सम्म।
काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०७६७७ का लागि सार्वजनिक हुने नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलब १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने भएको छ।
आगामी आविको बजेटमा निजामती कर्मचारीको मासिक तलब हाल खाइपाइ आएको भन्दा करिब १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढाइने तयारी थालिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको समाचार राजधानी दैनिकमा छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने अत्यधिक दबाब छ।
मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहने तलब पुनरावलोक समितिले पनि कर्मचारीको तलब वृद्धिको सिफारिस गर्ने भएको छ।
नर्सिङ पेसाको अँध्यारो पाटो
आफ्नो बच्चालाई बोतलको दूधका भरमा छोडेर अरुलाई पूर्ण स्तनपान सिकाउनुपर्ने नर्सका बाध्यता
बहिरबाट सरसरर्ती हेर्दा जतिको सहज देखिन्छ, त्यतिकै जटिल छ नर्सिङ पेसा।
यस पेसासँग आबद्धहरूले सुरुमा निकै कठोर मिहिनेत र त्याग गरेका हुन्छन्।
सर्वप्रथम त एउटा सफल नर्स बन्नका लागि धेरै त्याग तथा तपस्या चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। लाखौँ पैसा खर्च गरी अध्ययन पूरा गरेपछि लाइसेन्स लिनुपर्छ। तर, लाइसेन्स प्राप्त गरेका नर्सहरु बेरोजगारीको समस्याले त्रसित नभएका पनि होइनन्।
सन् २०१९ सम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा ८५ हजार ८ सय ८४ नर्सहरु नेपाल नर्सिङ कउन्सिलमा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ८ सय ४२ जना त विदेशीको संख्या छ।
मान्छे एक, रुप अनेक भनेझैं नर्स कसैकी छोरी, बुहारी, श्रीमती तथा कसैको प्राणप्रिय आमा हुन सक्छे। उनले विभिन्न भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि दैनिक ड्युटी त छँदैछ।
एउटी सुत्केरी जब सानो बच्चालाई घरमा बोतलको दूधको भरमा छोडेर जागिरमा हिँड्छिन्। खोइ त्यो बच्चाको लागि पूर्ण स्तनपानको अधिकार? खोइ आमाको न्यानो काख?
नर्सको मुहारमा मात्रै खुसी हैन मनैदेखि खुसीको बीज रोपिनुपर्ने होइन र?
दिनरात भोकतिर्खा, निद्रा, चाडपर्व केही नभनी ड्युटीमा खटिनुको पीडा बेग्लै छ। यसमाथि नियम अनुसार पाउनुपर्ने पारिश्रमिक र आत्मसम्मान समेत नहुँदा कस्तो हुँदो हो, त्यो नर्सलाई मात्र थाहा हुन्छ।
दिनरात सेवा गरी ‘लेडी विथ द ल्याम्प’को उपाधि पाएकी नर्स कुनै देवीको रुपभन्दा पनि कम छैन।
नर्सहरुसँग सम्बन्धित थुप्रै मुद्दा छन्। तिनीहरुलाई समुचित ढंगबाट पार लगाई व्यवहारमा ल्याउनु ठुलो कुरा हो।
मौखिक रुपमा चर्को भाषण गरी विभिन्न आश्वासन देखाई आँखामा छारो राख्नु भनेको भ्रमको खेती गर्नु सिवाय केही होइन। तसर्थ यो वर्षको नर्सिङ दिवस सँगसगै नर्सिङ मुद्दा, माग तथा विभिन्न समस्याको व्यवस्थापन बुद्धिमत्तापूर्ण तवरले सम्पन्न होस्। नर्सिङ पेसामाथि भएको राजनीतिक हाबीको अन्त्य हुनुपर्छ। नर्सिङ पेसालाई सम्मान गरी उनीहरुलाई सेवाप्रति आकर्षित गराइराख्नुपर्छ। नर्स अस्पतालको बलियो खम्बा मेरुदण्ड नै हुन्। के नर्स बिनाको अस्पताल कसैले कल्पना गर्न सक्ला?
तसर्थ नर्सिङ पेसामा आलोचना गर्नुअघि समस्याको जड पत्ता लगाउनु जरुरी छ। नर्सको मुहारमा मात्रै खुसी हैन मनैदेखि खुसीको बीज रोपिनुपर्ने होइन र?
त्यसैले नर्सिङ पेसाका सबै समस्या हल भई उनीहरुबीच एकता आवश्यक छ।
नर्सहरुलाई साथ दिऔं, सम्मान र प्रोत्साहन दिऔं।
(स्टाफ नर्स, लमही अस्पताल, दाङ)